ကားဆီဖြည့်တိုင်း ဆီတိုင်ကီ ပြည့်လျှံသည်အထိ မည်သည့်အခါမှ မဖြည့်သင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း.... ( ပြသနာ တက်သွားမယ်နော်...)
ကားဆီဖြည့်တိုင်း ဆီတိုင်ကီ ပြည့်လျှံသည်အထိ မည်သည့်အခါမှ မဖြည့်သင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း…. ( ပြသနာ တက်သွားမယ်နော်…)
ကားဆီဖွညျ့တိုငျး ဆီတိုငျကီ ပွညျ့လြှံသညျအထိ မညျသညျ့အခါမှ မဖွညျ့သငျ့တဲ့ အကွောငျးရငျး…. ( ပွသနာ တကျသှားမယျနျော…)
မညျသညျ့အကွောငျးနှငျ့မှ သငျ့ကားဆီတိုငျကီကို ပွညျ့လြှံသညျအထိဓာတျဆီ မဖွညျ့မိပါစနှေငျ့။ ဓာတျဆီဆိုငျမြားတှငျ သှားရောကျဖွညျ့ရာတှငျလညျး ပနျ့ကိုငျဝနျထမျးကို တိုငျကီပွှနျ( အဖုံးဖှငျ့လြှငျဖှငျ့ခငျြး တှရေ့သောအဝကယျြပိုကျ)ကွီးမှ လသေံကွားလြှငျ ဆီဆကျမထညျ့ဘဲ ရပျခိုငျးရနျဓာတျဆီဖွညျ့တိုငျးမှာကွားပါ၊ သို့မဟုတျ အခြို့သောခတျေမီဓာတျဆီဖွညျ့သညျ့တိုငျမြားမှ
ဂေါက်များမှာကားမှပြွန်အတွင်းစိုက်ထည့်ထားသည်တွင်ဓာတ်ဆီမျက်နှာပြင်တက်လာပြီး ဂေါက်နှုတ်သီးအဖျားနှင့်ထိသည်နှင့် ပန့်က အလိုအလျောက်ရပ်ပေးပါသည်။ ထိုသို့ ရပ်သွားသောစနစ်ပါလျှင်လည်း ဂေါက်ကိုနောက်ဆွဲ၍ ထပ်မံပြည့်သထက်ပြည့်စေရန်၊ သို့မဟုတ် ပြွန်ထိပ်ဝပိတ်သော အဖုံးအထိရောက်အောင်ဆီမဖြည့်ရန်ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ကားအချို့ ဓာတ်ဆီဖြည့်နေပုံမှာကားလှုပ်၍ ပြည့်လုနီးပါး
အဖုံးနှင့်ဓာတ်ဆီမျက်နှာပြင် ထိသည်အထိ ဆီထည့်နေကြသည်ကို စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာဖြင့်မကြာခဏတွေ့ရှိနေရခြင်းကြောင့် သတိပေးရခြင်းဖြစ်သည်။ အားလုံးသော ဓာတ်ဆီသုံးယာဉ်(ကား)များနှင့် ကားများတွင်ဆယ်စုနှစ်လေးခုလောက်မှစတင်၍ စနစ်အတွင်း ထွက်ပေါ်လာသည့် (မျဖစ္မေန ထွက်ပေါ်လာသည့်)ဓာတ်ဆီငွေ့ပြန်လည်စုဆောင်းသည့်စနစ်(Vap our Recovery System)ပါဝင်တပ်ဆင်လာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြန်လည်ဖမ်းမိထာသော
ဓာတျ(ဆီ)ငှမြေ့ားကို တိုငျကီအတှငျးမှာဖမျးသညျ။ ထိုမှတဆငျ့ လှောငျဘူးငယျ(Canister)အတှငျးသို့လမျးပွပို့ဆောငျသညျ။ အငျဂငျြလညျပတျနစေဉျ ဖွဈပျေါနသေော ဓာတျဆီဓာတျငှမြေ့ားကို Intake Manifold သို့ဆကျလကျ လမျးပွပို့ဆောငျပေးပွနျသညျ။ပေါကျကှဲမီးလောငျဖွဈစဉျ(Combustion Procedure)အတှငျး
ပါဝငျသှားနိုငျစရေနျလမျးကွောငျးပေးခွငျးလညျးဖွဈသညျ။ ဆောငျရှကျလိုကျသော ဤအစဉျတနျး၊ သို့မဟုတျ စနဈသညျကြှနျုပျတို့ ရှူရှိုကျနရေသောလကေို အဆိပျအတောကျ ကငျးနိုငျသမြှကငျးသှားစရေနျဆောငျရှကျလိုကျခွငျးဖွဈသညျ။ ဓာတျဆီတိုငျဂေါကျ(ခေါငျး)ကို တိုငျကီဆီထညျ့ပွှနျကွီးအတှငျးသို့စိုကျထားပွီး ဓာတျဆီအျောတိုပွညျ့နစေဉျ၊ သို့မဟုတျ
အပြည့်အလျှံမဟုတ်သေး၊ အနည်းငယ်လိုနေသေးသော အခြေအနေများတွင် လေသံများ စတင်ထွက်ပေါ်လာခိုက် ဆီဂေါက်မှ အလိုအလျောက်ဓာတ်ဆီအကျရပ်သွားမည်၊သို့မဟုတ် ရပ်လိုက်ပါ။ ကားကိုလှုပ်၍ ဆက်ထည့်သည့်အလုပ်မျိုး မပြုလုပ်၊ မဖြည့်အပ်ပေ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဓာတ်ဆီ(အရည်)ကို စနစ်တွင်းပါရှိသော ဓာတ်ဆီအငွေ့ဘူး(Vapour Cansister)အတွင်းသို့ ရောက်ရှိစေခြင်း
ဖြစ်သဖြင့် လွန်စွာအန္တရယ်များသည်။ ထိုသို့ ပြည့်လုနီးပါး အဖုံးပင်ပိတ်ရခက်သည့် အခြေအနေမျိုးအထိ ဓာတ်ဆီဖြည့်ခြင်းသည် သင် ဓာတ်ဆီဖြည့်နေစဉ် ဓာတ်ဆီအငွေ့ဘူးက တိုင်ကီမှလာသော ဓာတ်ဆီငွေ့(အငွေ့သက်သက်)ကိုသာ လက်ခံရမည်ဖြစ်သော်လည်း ဓာတ်ဆီငွေ့ကို လက်မခံနိုင်တော့သည့်အခြေအနေ၊ အနေအထား ဖြစ်သွားတော့မည်။ အငွေ့လှုပ်ရှားမူများအတွက်
လူးသာလှိမ့်သာပင် နေရာ(Space)လွတ် မကျန်လောက်အောင် ဓာတ်ဆီကို ဖြည့်လိုက်ပါကပြည့်ခါနီးအခြေအနေတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော ဓာတ်ဆီငွေ့တို့သည်မည်သည့်နေရာသို့ သွားရတော့မည်ကိုမသိနိုင်တော့ပေ။တိုင်ကီအတွင်းသို့ ဓာတ္ဆီကို ဖြည့်ညင်းစွာဖြည့်လျှင်ပင်ဓာတ်ဆီအငွေ့ပြန်သည်ကိုမလွှဲရှောင်နိုင်ပေ။ ဓာတ်ဆီငွေ့ ဆားကစ်စနစ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားရခြင်းမှာ ယခင်ကမလျော်မကန်
မှားယှငျးစှာ ဓာတျဆီဖွညျ့ခဲ့မူကွောငျ့ဖွဈနိုငျသညျ။ ယငျးသို့ခြှတျယှငျးပါက သငျ့ကားသညျလညျး ဓာတျဆီအငှလှေ့ောငျဘူးငယျအသဈ မလဲသရှေ့ ပုံမှနျဆီအပွညျ့ဖွဈရနျပငျ စနဈအတှငျးလခေိုအောငျးနမေူမြားကွောငျ့ မြားစှာအခကျအခဲတှပေ့လေိမျ့မညျ။ ဓာတျဆီဖွညျ့တငျးမူကို Auto ဖွတျတောကျခွငျးသညျ ဆကျတိုကျဖွတျတောကျမူမြား ဖွဈပျေါနပွေီး သငျ့ကားတိုငျကီမှာလဲ
ပုံမှနျအပွညျ့ဖွညျ့ရနျမညျသို့မြှမဖွဈနိုငျ ရှိခတြေော့မညျ။ယငျးအခကျအခဲကို ဖွရှေငျးရနျ တဈခုထညျးသော နညျးလမျးမှာ ပုံတှငျပွထားသညျ့ဓာတျဆီငှဘေူ့းမြိုးနှဈမြိုးအနကျ တဈမြိုးမြိုးကို အစားထိုးလဲလိုကျရနျဖွဈသညျ။ မိမိကားကို စကျပိုငျးဆိုငျရာပွဿနာဖွဈနိုငျသညျ့နညျးတူ ပတျဝနျးကငျြလထေုအတှငျးသို့ အဆိပျငှထေု့တျလှတျမူကိုဖွဈပျေါစသေညျကလညျး တဈကွောငျးကွောငျ့
မညျသို့မြှအကြိုးပိုရှိလာမညျမဟုတျသညျ့ သငျ့ကားဆီတိုငျကီအလှနျအမငျးပွညျ့သညျအထိဓာတျဆီဖွညျ့တငျးသညျ့ကိစ်စကိုမညျသညျ့အခါမြှ မပွုလုပျမိစရေနျသတိထားစလေိုပါသညျ။